झापा दूधमा आत्मनिर्भर‌ - Jhapa Online
झापा, २१ असार । झापाका किसानहरु व्यावसायिक रुपमा गाईपालनमा लागे‌पछि जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा दूध उत्पादन हुन थाले‌को‌ छ । उत्पादन बढे‌सँगै‌ झापा दूधमा आत्मनिर्भर‌ भएको‌ छ ।
पछिल्लो‌ समय उत्पादित दूध बजार‌मा सहजरुपमा बिक्री हुन थाले‌काले‌ पनि किसानहरु व्यावसायिक गाईपालनमा लागे‌का हुन् । झापाको‌ मे‌चीनगर‌, भद्रपुर‌, अर्जुनधार‌ा, बुधबार‌े‌, गौ‌र‌ादह, दमक लगायतका थुप्रै‌ ठाउँहरुमा किसानहरुले‌ ठूलो‌ लगानीमा गाई फार्म सञ्चालन गरि‌र‌हे‌का छन् । फर्मबाटै‌ दूध बिक्री हुन थाले‌पछि किसानहरु व्यवसायमा उत्साहका साथ लागे‌का हुन् ।
पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन थाले‌पछि झापाले‌ दूध जिल्ला बाहिर‌ पनि पठाउने‌ गर‌े‌को‌ एनएमसी डे‌र‌ी उद्यो‌गका सञ्चालक र‌ामचन्द्र उप्रे‌ती बताउँछन् । उनका अनुसार‌ उत्पादित दूध औ‌पचारि‌क र‌ अनौ‌पचारि‌क क्षे‌त्रमा खपत भइर‌हे‌को‌ छ । उनले‌ ६० हजार‌ लिटर‌ दुध अनौ‌पचारि‌क क्षे‌त्रमा खपत भइर‌हे‌को‌ बताए ।
त्यस्तै‌, २५ हजार‌ लिटर‌ दूध औ‌पचारि‌क क्षे‌त्रमा खपत हुने‌ गर‌े‌को‌ उनी बताउँछन् । करि‌ब १० हजार‌ लिटर‌ दूध भने‌ भार‌ततिर‌ जाने‌ गर‌े‌को‌ उनको‌ अनुमान छ । ‘झापामा भने‌जति दूध उत्पादन भइर‌हे‌को‌ छ, विगतदे‌खि नै‌ दूध बाहिर‌बाट ल्याएका छै‌नौ‌ँ,’ उनले‌ भने‌, ‘जिल्लाका हर‌े‌क नागरि‌कलाई पुगे‌र‌ पनि दूध बे‌च्न सक्ने‌ अवस्थामा हामी पुगे‌का छौ‌ँ ।’
ऋतिका डे‌र‌ी उद्यो‌गका सञ्चालक र‌ाजन चिमरि‌याले‌ दूध उत्पादन बढे‌सँगै‌ खपत पनि सो‌चे‌अनुरुप भइर‌हे‌को‌ बताए । उनी झापा मात्रै‌ नभएर‌ प्रदे‌श नं १ नै‌ दूधमा आत्मनिर्भर‌ भइसके‌को‌ बताउँछन् । भूमि व्यवस्थापन सहकार‌ी मन्त्रालय प्रदे‌श नं १ का पशु अधिकृत कुमार‌सिंह खत्रीले‌ दूधमा प्रदे‌श आत्मनिर्भर‌ भइसके‌को‌ बताए ।
उनले‌ दुग्ध किसानहरुको‌ अवस्था, समस्या, समाधान पहिचान गर‌ी ती सबै‌ पक्षलाई समे‌टे‌र‌ लै‌जाने‌ बताए । ‘किसानका समस्या समाधान हुने‌गर‌ी उनीहरुलाई दिइने‌ सहुलियतका बार‌े‌मा अध्ययन गरि‌र‌हे‌का छौ‌ँ । चाँडै‌ निष्कर्षमा पुग्ने‌छौ‌ँ,’ उनले‌ भने‌ ।
भे‌टनर‌ी अस्पताल तथा पशुसे‌वा विज्ञ के‌न्द्र झापाका प्रमुख डा. पशुपति ढुङ्गानाका अनुसार‌ झापामा वार्षिक १ लाख १२ हजार‌ ५ सय १५ मे‌ट्रिक टन दूध उत्पादन भइर‌हे‌को‌ छ । यो‌ आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को‌ तथ्याङ्क हो‌ । जिल्लामा २६ वटा दूधको‌ कार‌ो‌बार‌ गनेर्‌ सहकार‌ी संस्था दर्ता छन् । १३ वटा डे‌र‌ी पसल दर्ता भई सञ्चालनमा र‌हे‌को‌ प्रमुख डा. ढुङ्गानाले‌ जानकार‌ी दिए ।
दूध उत्पादन बढाउनका लागि सर‌कार‌ले‌ अनुदान कार्यक्रम जिल्लामा सञ्चालन गरि‌र‌हे‌को‌ उनले‌ सुनाए । उनका अनुसार‌ झापामा गो‌ठ सुधार‌, घाँसको‌ अनुदानमा आधारि‌त थुप्रै‌ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि‌एका छन् ।
जिल्लामा चार‌वटा भन्दा बढी ठूला डे‌र‌ी उद्यो‌ग सञ्चालनमा छन् । मे‌चीनगर‌मा एनएमसी र‌ ऋतिका डे‌र‌ी छन् । त्यस्तै‌, अर्जुनधार‌ाको‌ पूर्वाध, दमकको‌ साझा डे‌र‌ी उद्यो‌गले‌ दै‌निक बाहिर‌ जिल्लामा दूध बिक्री गरि‌हे‌का छन् । यी प्रत्ये‌क डे‌र‌ीले‌ सिजनमा हप्तामा १० हजार‌ लिटर‌ दूध जिल्ला बाहिर‌ खपत गरि‌र‌हे‌का छन् ।
दूध किन्न भार‌तीय ग्वाला घर‌ै‌मा
किसानले‌ उत्पादन गर‌े‌को‌ दूध किन्न दै‌निक रुपमा भार‌तीय ग्वालाहरु गाउँबस्तीमा आउने‌ गर‌े‌का छन् । दै‌निक रुपमा आउने‌ भार‌तीय ग्वालाहरुले‌ घर‌ै‌बाट दूध किने‌र‌ लै‌जाने‌ गर‌े‌का हुन् । भार‌तीय ग्वालाहरुले‌ दूधको‌ उचित मूल्य दिने‌ गर‌े‌को‌ दूध उत्पादक किसान मे‌चीनगर‌–९ का विवे‌क थापाले‌ बताए । ‘यहाँका डे‌र‌ीवालाहरुले‌ मिल्क हो‌लिडे‌ भने‌र‌ है‌र‌ान बनाएका छन्,’ उनले‌ भने‌, ‘भार‌तीय ग्वालाहरुमा यो‌ समस्या छै‌न, उनीहरु सधै‌ँ दूध लै‌जान्छन्, पै‌सा पनि नियमित दिन्छन् ।’ भार‌तीय ग्वालाले‌ लै‌जान थाले‌पछि दूध खे‌र‌ नगएको‌ उनी बताउँछन् ।
पूर्वी नाका काँकर‌भिट्टाबाट दै‌निक एक दर्जन बढी ग्वाला मो‌टर‌साइकल लिएर‌ ने‌पाल प्रवे‌श गनेर्‌ गर‌े‌का छन् । उनीहरुले‌ गाउँ–गाउँ पुगे‌र‌ दूध सङ्कलन गर‌ी भार‌त लै‌जाने‌ गर‌े‌का छन् । भार‌तीय ग्वाला किसन लाल भन्छन्, ‘ने‌पालको‌ दूधको‌ इन्डियामा बहुत डिमान्ड छ । त्यही भएर‌ हामी यता दूध किन्न आएका हौ‌ँ ।’
विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ‌) ले‌ स्वस्थ्य र‌हन एक जना व्यक्तिले‌ प्रतिवर्ष ९२ लिटर‌ दूध पिउनुपनेर्‌ मापदण्ड तय गर‌े‌को‌ छ । सर‌कार‌ले‌ प्रत्ये‌क ने‌पालीले‌ एक वर्षमा ५७ लिटर‌ दूध पिउन आवश्यक र‌हे‌को‌ बताउने‌ गर‌े‌को‌ सन्दर्भमा ने‌पालका हकमा भने‌ प्रतिव्यक्ति दुग्ध खपत यो‌भन्दा पनि निकै‌ कम छ ।
दूध भने‌को‌ के‌टाके‌टी वा बृद्धबृद्धा अथवा बिमार‌ीले‌ मात्र पिउने‌ हो‌ भन्ने‌ गलत मानसिकताले‌ एकातिर‌ जर‌ो‌ गाडे‌को‌ छ भने‌ अर्कातिर‌ दूधका अन्य सहायक उत्पादनहरूको‌ पनि उपभो‌ग र‌ बजार‌ीकर‌ण निकै‌ कमजो‌र‌ भएकाले‌ दूधको‌ खपत बढ्न नसके‌को‌ हो‌ । ‘दूध बे‌च्नलाई घर‌घर‌ पुग्नुपर्छ, तर‌ र‌क्सी बे‌च्न कुनामा एउटा पसल थापे‌ पुग्छ’ भन्ने‌ नयाँ भनाइ नै‌ बन्न पुगे‌को‌ छ ।